Iindawo ezifanelekileyo zokudibanisa kwakhona kunye nokufunda eMadrid | Uncwadi lwangoku
Iindawo ezifanelekileyo zokudibanisa kwakhona kunye nokufunda eMadrid
UJuan Ortiz | | Iincwadi, Iincwadi, Izaziso, Ezahlukeneyo
Ezona ndawo zibalaseleyo zokunxibelelana noncwadi eMadrid.
Ihlabathi loncwadi lube notshintsho olukhulu okoko kwafika i-4.0 Revolution. Ukubonakala kwee-PC kunye nazo iifomathi zeDoc kunye nePDF, i-intanethi, ii-Ebooks, i-Kindle kunye nezinye izixhobo zetekhnoloji zenze kwalula ukunyanzela amawaka amaphepha kwii-megabytes ezilula, kwaye oku kuye kwasebenza kwizigidi zabantu ukuba zifikelele kwimathiriyeli kuleyo ibingenakwenzeka ngaphambili.
Nangona kunjalo, into ebikade iqalile ikwazile neziphumo ezibonakalayo. Inxalenye yokungavumelani oku siye sakuchukumisa ngokusondeleyo kakhulu malunga noko kwenzekileyo ukuvalwa kweCírculo de Lectores nguGrupo Planeta.
1 Ngaba ukufunda ephepheni kuya kuphela?
2 Iindawo ezifanelekileyo zokudibanisa kwakhona kunye nokufunda eMadrid
2.1 Ivenkile kaManuel Miranda
2.2 Ithala leencwadi leZiko leLifa leMveli laseSpain
2.3 ILayibrari yeSizwe yaseSpain
2.4 Umbindi weCallao
2.5 ILayibrari yaseRoyal yeemonki yaseSan Lorenzo de El Escorial
2.6 Iincwadi zehlabathi elingcono
Ngaba ukufunda ephepheni kuya kuphela?
Hayi, ngokuqinisekileyo, ukuthetha ngaloo nto iya kuba kukuzibaxa izinto. Nangona kunjalo, kwaye ngaphezulu kwezizathu zendalo kunayo nayiphi na enye into-iplanethi iyayifuna-, okuza kwenzeka kukuba, njengoko iminyaka ihamba, ukuprintwa kweencwadi kuya kuncipha.
Into eyakwenzeka kwakhona kukuba lo mkhwa wokufunda kunye nokunxibelelana ngqo nencwadi eprintiweyo nawo uya kuncipha. Oku kuya kulungiswa yimibandela eliqela, itekhnoloji enye, kunye nexesha lexesha. Amashishini amatsha athabatha inxaxheba kubemi banamhlanje, kwaye zininzi izinto eziphazamisayo, bambalwa abazibandakanya ngokupheleleyo kolu lonwabo lubalaseleyo.
Kwabo bathembekileyo kwinjongo, kwaye bahlala eMadrid, uluhlu lweendawo ezintle ziye zaqulunqwa ukuze bonwabele ukonwaba kokufunda indlela yakudala kwidolophu entle yaseSpain.
Ivenkile kaManuel Miranda
Umdlali weqonga owaziwayo uManuel Miranda ushiye ilifa elihle esixekweni, ingqokelela yakhe yangasese yeencwadi. Indawo itshintshe idilesi kathathu, kodwa okwangoku ungayifumana eCalle Lope de Vega N ° 9.
Ukungena kule ndawo kukutsiba ungene kwitafile entle, isitulo somthi, amagqabi aqinileyo, uthuli oluncinci kunye nehlabathi elilinde iperi yamehlo ukuba liqonde.
Ithala leencwadi leZiko leLifa leMveli laseSpain
Eli thala leencwadi lingafunyanwa kwi "The Crown of ameva", igama elinikwe isakhiwo esihlala kulo ngenxa yokufana kwalo nesithsaba esibonisiweyo. Ngaphakathi uyakufumana intuthuzelo kunye neencwadi ezingaphezulu kwamawaka angama-40 lokonwaba kwakho. Indawo ilungele ukuchitha ixesha lakho lokufunda.
ILayibrari yeSizwe yaseSpain
Esi sithuba sicocekileyo siyafumaneka kuwo onke amaMadrilenians kwiThala leeNcwadi leSizwe nakwiNdlu yeMyuziyam Yindawo enembali kwaye sithethileyo ngoku ukukhusela oovimba beCírculo de Lectores.
Sithetha ngolwakhiwo olungaphezulu kweminyaka eli-120 ubudala. Inerepertoire enkulu yeencwadi zazo zonke izinto ozithandayo. Qiniseka ukuba undwendwela iPaseo de Recoletos. Ewe kunjalo, ukuze ungene kummandla wendawo yokufunda, kufuneka ikhadi. Oku kunokucelwa ngewebhu.
ILayibrari yeSizwe yaseSpain.
Ukuba sithetha ngokubetha kunye neendawo ezithandwayo zokufunda, iLa central del Callao kufuneka. Ungayindwendwela ePostigo de San Martín N ° 8. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ngelixa ufunda, ungonwabela ikofu elungileyo okanye isivakalisi.
ILayibrari yaseRoyal yeemonki yaseSan Lorenzo de El Escorial
Sineli tyala lesikhumbuzo soncwadi kuKumkani uFelipe II. Ukuthanda kwalo kumkani ngeencwadi kwamkhokelela ekubeni ayalele ukuba kwakhiwe le ndawo ibiyelweyo, eyalela ukuba izaliswe zezona zinto zibalaseleyo kuncwadi lwexesha lakhe.
Ukufunda kwizithuba zale ndawo sisenzo esivela kuThixo. Izithuba zikhumbula imbali yaseSpain eyadlulayo, kwaye imiqulu elayibrari bubutyebi bembali yoluntu.
Iincwadi zehlabathi elingcono
Ukuba uyakuthanda ukufunda, iikati kwaye uhlala eMadrid, iLibros para un mundo mejor yindawo yakho efanelekileyo. Kwizithuba zayo ezona ncwadi zintle ngalo lonke ixesha zidityaniswe nezinye ezininzi.
Izibonelelo zayo zikwiCalle del Espíritu Santo, kwaye iingcango zayo zihlala zivulekile kubo bonke abafuna ukutyala ixesha labo kubugcisa bokufunda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iindawo ezifanelekileyo zokudibanisa kwakhona kunye nokufunda eMadrid